New Boeing 737-MAX8 Multi-Livery soo dejiso Bilood 4 2 todobaad ka hor #1655
New Boeing 737-MAX8 Multi-Livery soo dejiso Bilood 4 2 todobaad ka hor #1657
Waqti ka dib waxaan helay farriinta "diyaaradda oo culeys badan". Maxuu noqon karaa sababta, dhammaan cabirrada duulimaadyadu waxay u muuqdaan inay caadi yihiin
New Boeing 737-MAX8 Multi-Livery soo dejiso Bilood 4 2 todobaad ka hor #1658
Arrin kale ayaa ah dhawaq kacsan oo la maqlayo waqtiga oo dhan. Sidoo kale waxaan u maleynayaa inay fiicnaan laheyd in ugu dambeyntii laga saaro muraayadaha kore ee sare ee aan loo isticmaalin moodeeladaan dambe.
New Boeing 737-MAX8 Multi-Livery soo dejiso Bilood 4 2 todobaad ka hor #1659
Inta badan arrimaha aad sheegatay maahan “arrimo” laakiin waxay ka yimaadeen xaqiiqda inaadan samayn cilmi baaris dheeraad ah.
Marka hore matoorrada cusub 737-Max8 MA AHAAN SI AAD U HESHI KARO laakiin waxoogaa yar oo dabaq ah, HAA in ka yar 737-800 laakiin weli waa la arki karaa waana nooca 3D ee Hiroshi Igami si fiican ayaa loo qaabeeyey oo 100% HALKAN.
Iftiinka: nalalka oo dhan waxaa laga xakameynayaa Utility Panel sida lagu sharxay bogga soo degsiga.
"Ugu dambeyntiina uguyaraan Nolosha KLM iyo Transavia waxay kujiraan Nolosha Hore" Haddii aan heli lahaa dayactirradii ugu dambeeyay waan ku dari lahaa laakiin kuma aanan darin
HansM: Ku saabsan dhawaqa dhawaaqa waa la hagaajin karaa aniga ayaa hagaajin doona ASAP.
New Boeing 737-MAX8 Multi-Livery soo dejiso Bilood 4 2 todobaad ka hor #1660
Waan yareeyay dhawaaqa Gyro, hadda waad kala soo bixi kartaa nooca ugu dambeeyay.
Waad ku mahadsantahay iyo duulimaad faraxsan
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: wclarksn
New Boeing 737-MAX8 Multi-Livery soo dejiso Bilood 4 2 todobaad ka hor #1663
Runtii waan ku raaxeystay duulimaadka 737-max8. Waxaan xushay liifka hawada ee Ingiriiska, waan duulay, anigoo fuulay 36,000 oo lug ah ka dibna waxaan mashiinnada u rogay shaqo la’aan waxaanan ku guuleystey inaan dib ugu soo laabto dariiqyada. waxay uga jawaabtay si qurux badan oo qumman. Waxaan sameyn doonaa waxoogaa hagaajin ah laydhyada is-baheysiga waxaanan xallin doonaa dhibaatada korontada si joogto ah u saaran. Isku soo wada duuboo, ragga sida wanaagsan loo qabtay, waan kugu hambalyeynayaa oo aan kaaga mahadcelinayaa mashruucaaga cajiibka ah.
New Boeing 737-MAX8 Multi-Livery soo dejiso Bilood 4 2 todobaad ka hor #1665
Waxaan hayaa Laydhka kala soocaya wakhti in la helo gudida utility-ka anigoo ku duulaya habeenkii, Waxaan jeclahay inaan kugu wargaliyo in Runway TurnOff Light uu leexleexeeyaa Nalalka nalka marka uu ka leexinayo aragtida Virtual Cockpit, guud ahaan waa waa horumar aad u weyn heerka FSX Diyaaradda 737.
New Boeing 737-MAX8 Multi-Livery soo dejiso Bilood 4 2 todobaad ka hor #1666
Waxaa jira hal shay oo muhiim ah oo aan wali la saxin, runtii altimitirku wuxuu muujiyaa MB markii ay tahay inay muujiso IN! Markii aad dhaqaajiso jiirka korka badhanka hagaajinta ee miiska Baro Std, waxay hadda muujineysaa IN laakiin ma saxo. Laydhka LED-yada wuxuu had iyo jeer muujinayaa qiimayaasha kujira MB! Waxaan weli qabaa inay tahay dhibaato duullimaad oo u qalma dareenka barnaamijyada. Waad ku mahadsan tahay dareenkaaga.
Nalalka kala duwan ee nalka tooska ah ama nalka tooska ah iyo nalalka waa ay shaqeynayaan tan add-on.
Thanks to Rikoooo, Salaannada Wanaagsan
New Boeing 737-MAX8 Multi-Livery soo dejiso Bilood 4 2 todobaad ka hor #1668
Hi Jackie, waa dhibaato XML waana xallin karaa.
New Boeing 737-MAX8 Multi-Livery soo dejiso Bilood 4 2 todobaad ka hor #1669
ok waad ku mahadsantahay macluumaadkaaga iyo pdf!
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray JackyB.